Ndine urombo Disqus, Ndiri Fan Zvino! | Martech Zone
Ndine urombo Disqus, Ndiri Fan Zvino!
Chipiri, June 16, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nenyaya dzese idzi dzagadziriswa, uye Disqus 'ichikura mashandiro uye kusangana muSocial Media, zvinonyatsoita pfungwa zhinji kune maWebloggi mabloggi kuti aise iyo plugin nekusanganisa sevhisi. Ini handina kuyedza IntenseDebate, uye ini handina kuona nhau dzakawandisa kana kugamuchirwa nezvazvo… chero munhu anoishandisa?
Ivo vanhu vane mutsa paDisqus vakatondibvumidza kuendesa kunze kwangu blog zvinyorwa uye zvirevo kuburikidza neXML uye nekuzviisa kune yavo timu yekutsigira. Ivo vava kutamisa ese ekare makomendi kubva kublog rangu kuenda muinjini yavo. Kunaka kupora!
Saka… kuvashandi vepaDisqus, ndine chikwereti chako chekukumbira ruregerero nekupa yako chikumbiro giredhi rakundikana. Kunyangwe chaive chinhu chakakodzera kuita panguva iyoyo, ndiri feni izvozvi! Une chigadzirwa chinonakidza uye ndinoda kubatana kwe Twitter!
Tags: comment systemkutaura systemDisqus
Mukaha Mukushambadzira Tekinoroji?
Chinja Yako Injini Inotsvaga muSafari paLeopard
Jun 16, 2009 pa 10: 06 PM
Ini ndaitove nemamwe matambudziko neDisqus, asi mune dzidziso ipulagi yakanaka. Ndakafarira mameseji avanotumira kwandiri kana mumwe munhu achinge ataura, asi pakazara sisitimu yacho haina kundishandira. Iwe unofungei nezve ivo system iyo yakatora nzvimbo yeZezWho?
Jun 16, 2009 pa 6: 15 PM
Ndinofara ini ndinogona kubatsira =) Inzwa wakasununguka kundibaya kana iwe uchida chero chimwe chinhu.
Gumiguru 10, 2009 na10: 46 PM
Ini ndaive muchikepe chimwe chete, ndakaenda kubva kuWordPress chete kuenda kuDisqus asi ndaive nenyaya dzakafanana saka ndokuzoenda kuIntenseDebate uye ikozvino kuyedza Disqus zvakare nekuti ID yaive ese marudzi emboro.
Yangu Disqus inoita kunge iine dambudziko rakafanana munhu wese arinaro neWordPress 2.8.4, zvinongorega kupinza makomendi.
Ndiri kuzomudzima ndotsvaga chimwe chinhu…. zvakare?
Feb 22, 2011 at 3:59 PM
Ini ndinofanira kubvuma - iyo floppy mitsetse-yemapepa bvudzi paDoAX2 yaingova marara.
Gumiguru 14, 2011 pa 1:11 AM
Iyo inotyisa kwazvo positi ine disqus
Gumiguru 30, 2011 na8: 09 PM
Gumiguru 30, 2011 na8: 59 PM
Ini ndinofunga inoyamwa kuti spammers vatora iyo indasitiri zvakashata zvekuti isu tinofanirwa kuve nezviyero munzvimbo senge logins; zvisinei, yemabhizinesi nzvimbo - zvine musoro uye inzira huru yekuunganidza rumwe ruzivo pane tarisiro.
Dec 19, 2013 pa 9: 29 AM
Unorevei ne "spam"?
Jan 1, 2012 pa 9: 44 AM
Ini ndinoda Disqus, yakapusa kuisa uye nyore kushandisa. Bvumirana naDouglas nezve izvo zvichidikanwa kuve nemarogi, zvirinani pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekutema mukati, google, yahoo, facebook, twitter nezvimwe.
Kukadzi 22, 2012 na7: 08 PM
Ini ndinongo CHIDA icho. Izvo Zvinonyanya Kubatsira Nyore kushandisa.
Mar 26, 2012 pa 11: 44 AM
Kutenda nekutora nguva yekukurukura izvi, ndinonzwa zvine simba
nezvazvo uye ndinoda kudzidza zvakawanda pamusoro penyaya iyi. Kana zvichibvira, sezvaunowana
hunyanzvi, ungafunga here kugadzirisa yako blog nerumwe ruzivo? Ndizvo
inobatsira kwazvo kwandiri.
Apr 18, 2012 pa 6: 58 AM
Ini ndinongoda magariro Disqus ari! Zvakareruka kushandisa musocial kupfuura chero imwe "yakachena" yekupindura system yandinofunga nezvayo.
Mbudzi 16, 2012 na1: 14 PM
Disqus inotyisa !!
Mar 5, 2014 pa 9: 05 AM
Haisi chokwadi kana iri iro rakanakisa rekutaura chikuva, asi Disqus yakanyatso kukura nekukurumidza mugore rapfuura kana maviri.
Mar 5, 2014 pa 9: 13 AM
Kuedzwa kushandisa iyo plugin, asi kubata senge ikozvino. Akawanda plugins kare, kusanganisira imwe yeFB zvirevo.